बिहे गर्दै हुनुहुन्छ वा बिहे गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने २ मिनेट समय दिएर यो अवश्य पढ्नुस ! – AB Sansar
November 8, 2020 adminLeaveaComment on बिहे गर्दै हुनुहुन्छ वा बिहे गर्ने सोचमा हुनुहुन्छ भने २ मिनेट समय दिएर यो अवश्य पढ्नुस !
तपाईं विवाह गर्नेबारे सोचिरहनु भएको छ ? यदी तपाईंले त’त्काल विवाह गर्नेबारे सोच्नुभएको छ भने विवाह गर्न लागेको पा’र्टनरसँग खु’लेर कुरा गर्नुस्, आफ्ना कुरा र उनका कुरा सुन्ने र बुझ्ने प्रयास गर्नुस् । यसरी खु’लस्त भएर विवाह गर्दा आगामी दिनमा तपाईंको बैवाहिक अवस्था सुखद् बन्न जान्छ । विवाहलाई लिएर मानिसले केही खालका सपना देखेका हुन्छन् । *** पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***
वानिव्यहोरा– विवाह भन्दा पहिला आफ्नो पा’र्टनरको वानी व्यहोरा बारे जानकारी लिन जरुरी हुन्छ । प्रेम सम्बन्ध भएकाहरुले बानी व्यहोरा बारे जानकार भएको भएपनि मागी विवाह गर्नेले आफ्नो पार्टरको बानी व्यहोरा थाहा नपाएको हुनसक्छ । त्यसलैले उसलाई के मन पर्छ के मन पर्दैन भन्ने कुरा थाहा पाएको खण्डमा सहज हुन जान्छ । यसरी पार्टनरको बानी व्यहोराबारे जानकारी लिँदा दाम्पत्य जीवनलाई राम्रो बनाउन सकिन्छ ।*** पूरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला ***